အဘယ်မှာရှိကျင်းပဖို့တရုတ်နှစ်သစ်ကူးအတွက်ဥရောပ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား > အဘယ်မှာရှိကျင်းပဖို့တရုတ်နှစ်သစ်ကူးအတွက်ဥရောပ
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 08/01/2021)
Dancing နဂါး, ကြံ့, နှင့်ဝက်ပျံ. ဟုတ်ကဲ့, ဝက်! အဆိုပါဝက်၏တစ်နှစ်တာအခမ်းအနားကျင်းပ, ဥရောပတိုက်တွင်တရုတ်နှစ်သစ်ကူးဆင်နွှဲ!
တရုတ်နှစ်သစ်ကူး, ထို့အပြင်အဖြစ်လူသိများ နွေဦး ပွဲတော်သို့မဟုတ် Lunar New Year, တရုတ်ပြက္ခဒိန်မှာအရေးအပါဆုံးအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာအားဖြင့်မှတ်သားအထူးအခါသမယင် မိသားစု စုဝေး, အစားအစာထုံးတမ်း, ဘုရားကျောင်းမှာပြုသောပူဇော်သက္ကာ, နှင့် - သင်တန်း - မီးရှူးမီးပန်းများ. တရုတ်နှစ်သစ်ကူးအခမ်းအနားကျင်းပဖို့အထူးတစ်ခုခုဥရောပ၌ရှိပါရဲ့. ဒါဟာတစ်ဦးရှေးဟောင်းတရုတ်အစဉ်အလာတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်ထူးခြားတဲ့အခွင့်အလမ်းဖွင့်, နောက်ကျောချိန်းတွေ့ 4000 နှစ်ပေါင်း. သငျသညျအခွင့်အလမ်းများလာသောအခါသူကအပေါ်ကိုထုတ်လက်လွတ်မနေပါနဲ့!
တရုတ်နှစ်သစ်ကူးအခမ်းအနားကျင်းပဘို့အမှတ် 1 ဥရောပမှာ | မက်ဒရစ်, စပိန်
နေထိုင်တရုတ်ကလူအရေအတွက် စပိန် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းသိသိသာသာစိုက်ပျိုးထားပါတယ်, နှင့်ဤတိုးနိုင်ငံအတွင်းတရုတ်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်များ၏အဆင့်အားဖြင့်ထင်ဟပ်လျက်ရှိသည်. တွင် 2019, ကွဲပြားခြားနားသောဘာမျှမမျှော်လင့်ထား.
တတိယနှစ်တွင်ပြေးများအတွက်, စပိန်မြို့တော် စပိန်အတွက်ဥရောပမှာတရုတ်နှစ်သစ်ကူးအခမ်းအနားကျင်းပဖို့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, တရုတ်သံရုံးကစီစဉ်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ပွဲလမ်းသဘင် program နဲ့. ဖျော်ဖြေပွဲ, အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ, လမ်းပေါ်စစ်ရေးပြ, နှင့် gastronomic လမ်းကြောင်းများ လူအပေါင်းတို့သည် Usera ခရိုင်တွင်ကျင်းပသည့်ပွဲတော်များ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်လိမ့်မည် - မက်ဒရစ်ရဲ့တရုတ်တန်း၏နေအိမ်.
ပဲရစ်ကိုသင်တဲ့အခါမှာစဉ်းစားပထမဦးဆုံးမြို့မဟုတ်ပါဘူး နေရာတစ်နေရာစဉ်းစား ဥရောပတိုက်တွင်တရုတ်နှစ်သစ်ကူးအခမ်းအနားကျင်းပရန်. ဒါပေမဲ့ဒီမှော် စိတ်ကူးယဉ်တတ်သော မြို့ပွဲတော်ကာလအတွင်းတရုတ်အခမ်းအနားတစ်ဦးမြို့တော်သို့လှည့်.
ပဲရစ်ရုံဆွဲဆောင်မှုရှိသောစစ်ရေးပြအကြောင်းကိုမဟုတ်ပါဘူး နှင့်ပီပီအလှဆင်သော်လည်း. ဤအချိန်ကျော်က၎င်း၏အကောင်းဆုံးထားရှိမည်လျှို့ဝှက်ချက် 13 ခရိုင်တွင်တည်ရှိသောနှစ်ခုဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားကျောင်းဖြစ်ပါသည်. ဒီမှာကမိသားစုများ တရုတ်နိုင်ငံ, ဗီယက်နမ်, နှင့်ကမ္ဘောဒီးယားထဲမှာသူတို့ရဲ့လေးစားမှုနှင့်ကြိုဆိုဆပ်ဖို့လာ နှစ်သစ်. တရုတ်အနုပညာနှင့်လက်မှုပညာ၏ဆန္ဒပြပွဲများခံစားကြည့်ပါ, ချက်ပြုတ်, နှင့်ရိုးရာအကနှင့် ဂီတ. တကယ်၎င်း၏အမည်ကိုမှနှစ်စဉ်ဒီအချိန်အထိအသက်ရှင်နေထိုင်အလင်းအိမ်၏မြို့ကိုကြည့်ပါ. တဖန်သင်တို့အတတျနိုငျဆုံးအမှုအရာ အမ်စတာဒမ်မှပဲရစ်မြို့ကနေမီးရထားခရီးသွားလာ နှင့်နှစ်ဦးစလုံးမြို့ကြီးတွေမှာကျင်းပ!
ပျော်စရာတကယ်တော့: အမ်စတာဒမ်ရဲ့နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားနီ-အလင်းခရိုင်အမှန်တကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားကျောင်းမှနေရာဖြစ်သည်. နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း, သငျသညျအမ်စတာဒမ်အတွက်နှင့် The န်းကျင်ဥရောပမှာတရုတ်နှစ်သစ်ကူးအခမ်းအနားကျင်းပနိုင်ပါတယ် fo Guang ရှမ်းသူဟွာ အထူး program နဲ့.
သငျသညျစစ်မှန်တရုတ်အစားအစာများအတွက်တဏှာရှိပါကမြို့၏ဤအပိုငျးအစသည်ကြီး. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနာမည်ကြီးကြည့်ရှုနန်းတော်မှာမုန့်ညက်ဖမ်းပြီး (ဥရောပရဲ့ပထမဆုံးရေပေါ်တရုတ်စားသောက်ဆိုင်) ဒါမှမဟုတ် Geldersekade မှာအများအပြားတရုတ်စားသောက်ဆိုင်တဦးမှာ.
နောက်ဆုံးဥရောပတိုက်တွင်တရုတ်နှစ်သစ်ကူးအခမ်းအနားကျင်းပ | အင်္ဂလန်နိုင်ငံ
ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ကအင်္ဂလန်ကဥရောပမှာတရုတ်နှစ်သစ်ကူးဆင်နွှဲဖို့ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးလမ်းရရှိထားသူကြောင်းကြွားဂုဏ်ယူကြာ, အာရှပြင်ပတွင်. ဒါကြောင့်, ဒါပေါ့, သင်ဥရောပ၌တရုတ်နှစ်သစ်ကူးကိုကျင်းပသည့်အခါယင်းသည်ထိမိသောတစ်ခုဖြစ်သည်.
ဤမြို့သည်တစ်ရက်ရရှိထားသူ ပွဲတော် ရိုးရာအစားအစာအပါအဝင်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူထုပ်ပိုးကုိုကြည့်, နှစ်စဉ်ချီတက်ပွဲ, ဖျော်ဖြေပွဲ, နှင့်ရိုးရာလက်မှုပညာ. (သငျသညျအစဉ်အလာအစားအစာမှာကျွန်တော်တို့ကိုရှိခဲ့တယ်!) ကို Count!
ဒီပွဲတော်ကိုကျင်းပတဲ့အင်္ဂလန်မှာအဓိကနေရာ ၃ ခုရှိတယ်; Trafalgar ရင်ပြင်မှာ, တရုတ်ပြည်, နှင့် Shaftesbury ရိပ်သာလမ်း. အသီးအသီးတမူထူးခြားတဲ့အတွက်တိကျတဲ့လှုပ်ရှားမှုများနှင့် ဖြစ်ရပ်များကိုသူတို့ပူဇော်; ဧည့်သည်များလုပ်ဖို့ရာခဲယဉ်းအချိန်ရွေးချယ်ရပါလိမ့်မယ်.
တရုတ်တန်းရိုးရာအစားအစာအသုံးအနှုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးကမ်းလှမ်း. သေချာသင်အများအပြား၏တဦးတည်းမှာစားပွဲတစ်ခု secure စောစောစာအုပ်ဆိုင် Make အလွစားသောက်ဆိုင်. တရုတ်တန်းကံကောင်းအနီရောင်မီးအိမ်နှင့်နဖူးစည်းစာတမ်းတွေနှင့်အတူအလှဆင်၏အရှိဆုံးအလွထွက်တကွရရှိ. တရုတ်ကခုန်အုပ်စုများနှင့်အဆိုတော်တစ်လျှောက်လုံးများစွာအဆင့်ဆင့်အပေါ်ကို set up တွေ့နိုင်ပါသည်. လန်ဒန်တစ်ဦးမျက်နှာသစ်ဖြစ်နိုင်သည် တရုတ်နှစ်သစ်ကူးမြင်ကွင်းတစ်ခုဖို့ပေမယ့်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပိုကြီးပိုကောင်းဖြစ်လာကျနော်တို့တွင်မည်သို့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်မစောင့်နိုင် 2019!
ဥရောပ၌တရုတ်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကိုကျင်းပရန်နှင့်ဤမြို့များထဲမှတစ်ခုသို့ရောက်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကားအဘယ်နည်း? ရထားနဲ့, ဒါပေါ့! အသုံး SaveATrain မိနစ်အတွက်အကောင်းဆုံးစာချုပ်စာအုပ်ဆိုင်!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသားယူပြီးရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုခရက်ဒစ်ပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ link ကို ဤ blog post မှ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcelebrate-chinese-new-year-europe%2F - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
#တရုတ်နှစ်သစ်ကူး #yearofthebpig europetravel longtrainjourneys ရထားခရီးသွား ရထားခရီးစဉ် travelamsterdam travelfrance